Ravina vita amin'ny hazo "Autumn" - Mili Mili
Home > Ny ravin-tanimanga tanimanga dia lasa "Autumn"
Ny ravin-tanimanga tanimanga dia lasa "Autumn"
Garland vita vita amin'ny ravina rongony dimy amin'ny alàlan'ny loko telo dia ny tolo-kevitra voalohany avy amin'i Moi Mili. Miantehitra amin'ny kofehy vita amin'ny lamba vita amin'ny vakana hazo ny zavatra rehetra. Noho ny endriny sy ny lokony tsy manam-paharoa, dia hamporisika ny hahafinaritra sy hiaina ao an-efitran'ny ankizy izany. Izy io dia ho tsara ho toy ny haingon-trano na famoronana sehatra.
Ny refy isaky ny pendant 14 cm x 15 cm.